Donald Tramp deeggarsa maallaqaa Ameerikaan Dhaabbata Fayyaa Addunyaa (WHO) kennitu addaan kutuu beeksise - NuuralHudaa
Prezdaant Traamp ibsa kenneen, Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa weerara Vayirasii koroonaa ilaalchisee maqaa Chaayinaa eeguuf jecha yeroo dheeraaf odeeyfannoo sobaa kennaa ture jechuun yakke. Traamp akka jedhetti, “WHO’n Vaayirasichi namarraa namatti kan darbuu miti; akkasumas imala gara Chaayinaatti godhamu addaan kutuun hin barbaachisu jechuu isaatiin, Vayirasiin koroonaa Ameerikaa dabalatee biyyoota addunyaa keessatti faca’uun lubbuu ummata kumaatamaa galafataa jira” jedhe.
Haaluma kanaan Donald Tramp, Dhaabbatichi yoo xiqqaate Chaayinaa wajjiin dubbii sobaa facaasuu isaa amanee itti gaafatamummaa hanga fudhatutti, Ameerikaan mallaqa Dolaara Miiliyoona 450 tahu kan WHO kennaa turte addaan kutuu beeksise.
Murtiin Traamp kun Dhaabbta Mootummoota Gamtoomanii fi Waldaa Ogeeyyota Fayyaa Ameerikaa dabalatee qaamota heddu biratti komii kaasaa jira. Barreessaan ol’aanaan UN Antooniyoo Gutareez ibsa baaseen “yeroo kanatti WHO irraa deeggarsa dhaabuun haala kamiinuu fudhatama hin qabu” jedhe.
Prezdaantiin Waldaa Fayyaa Ameerikaa Dr. Patrice Harris gama isaatiin, “Ameerikaan yeroo kanatti WHO irraa deeggarsa dhaabuun weerarri Vayirasii koroonaa akka hin too’atamne godhuun alatti bu’aa tokkollee hin qabu” jedhu.
WHO’n ji’a lama dura Dhibeen Vayirasii Koroonaa Chaayinatti ka’e, sadarkaa Weerara Addunyaatti guddachuu mala jechuun eega akeekkachiisee booda, Donald Tramp gama isaatiin, “dhibeen COVID-19 jedhamu wanta akka qofa/utaalloo salphaa taheefi kan tasa dhabamu waan taheef Ameerikaa hin cinqu” jechuun isaa ni yaadatama.
September 21, 2021 sa;aa 2:22 am Update tahe